Global Voices teny Malagasy » Filipina : Miala Tsiny Ny Tafika Taorian’ny “Nandikàny Vilana” Ny Fijerin’ny Firenena Mikambana Ny Famindràna Toerana Ireo “Ata-Manobos” Hiala Ny Fonenany · Global Voices teny Malagasy » Print
Filipina : Miala Tsiny Ny Tafika Taorian'ny “Nandikàny Vilana” Ny Fijerin'ny Firenena Mikambana Ny Famindràna Toerana Ireo “Ata-Manobos” Hiala Ny Fonenany
Voadika ny 14 Aogositra 2015 2:02 GMT 1	 · Mpanoratra Karlo Mongaya Nandika Nancy
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Voina, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Ireo lehibe-nà foko izay nahita fialokalofana tao Davao City, mitaky ny fanesorana ireo miaramila any an-tànanany. Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'i Terry Ridon
Notsikerain’ ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpanao politika ny Tafika Mitam-piadiana any Filipina noho ny nandikàny vilana ny fanambaràn'i Chaloka Beyani, mpitondra teny manokan'ny Firenena Mikambana momba ny zon'ireo olona nafindra toeram-ponenana fa ao amin'ny fireneny ihany (IDPs).
Fanambaràna iray an-gazety  navoakan'ny AFP-n'ny Eastern Mindanao Command (Komandin'i Mindanao Atsinanana) no niteny fa nolazain'i Beyiani avy amin'ny Firenena Mikambana fa “tsy nafindra toerana mba harovana” ireo vahoaka indizena nafindra toeram-ponenana ka nahita fialokalofana tao anatin'ny fiangonan'i Davao City ireo fa “niharan'ny fanondranana antsokosoko”.
Nanao fanambaràna hentitra i Beyani, izay namerenany fa ” tsy marina, tsy azo ekena, ary mamilana ny fomba fijeriny momba ity olana ity” ny fanambaràna an-gazety nataon'ny tafika.
Lazain'ny Ata-Manobos fa noterena hiala ny tranony ry zareo
Maherin'ny 700 ireo Ata-Manobos nijanona tao amin'ny Firaisan'ny Fiangonan'i Kristy any Filipina (UCCP) ao amin'ny Tànanan'ny Misiona Haran any Davao City, any amin'ny tapany atsimon'i Filipina, hatramin'ny volana May tamin'ity taona ity. Hizingizinin-dry zareo fa noterena hiala ny tranony tany Talaingod, Davao del Norte ary tany amin'ny faritra sasany any Mindanao ry zareo noho ny honohono momba ny fisianà miaramila betsaka sy firotsahana arahan-terisetra ho anaty vondrona milisy tohanan'ny governemanta ao anatn'ny vondrom-piarahamonin-dry zareo.
Tamin'ny 23 Jolay, noezahan'ny mpitandro filaminana “navotana”  ireo Ata Manobos, tamin'ny fangalàna  azy ireo tamin-kery tao anatin'ny faritry ny fiangonana sy namerenana azy tany an-tanànany. Nefa nandà ireo Ata Manobos ary nilaza fa tsy hiverina raha tsy miala any an-tanànany ireo andian-tafika. Nanao taratasy fitoriana ny mpiaro ny zon'olombelona sy ireo mpiasan'ny fiangonana izay nanampy ny Ata-Manobos amin'ny fitadiavana fialokalofana ao an'ivon'ny UCCP momba ny raharaha fanondranana olona ny tafika sy ny mpitandro filaminana.
Ny Tatitra ôfisialin'ny Firenena Mikambana
Nampametra-panontaniana ny mpiaro ny Zon'olombelona ny fandikan'ny tafika ny fanambaràn'i Beyani, tamin'ny filazàny fa mifanohitra tanteraka amin'ny tatitra ôfisialy  nataon'i Beyani rehefa namarana ny fitsidihany 10 andro tany amin'io firenana io izy :
Reko tamin'ny [tafika] AFP ny fanamafisany fa eo am-pikarohana izay hiarovana ireo vondrom-piarahamonina sy hanomezana tolora ho azy ireo any amin'ireo faritry ny fifandirana izy ; nefa nazavain'ireo IPs tsara fa ny fisian'izy ireo sy ireo vondrona milisy ao anatin'ny vondrom-piarahamonina no mitohy mampisy ny fitaintainana eo amin'ireo vondrom-piarahamonina indizena. Te-hody any amin'ny taniny ny vondrom-piarahamonina saingy namafisiny tamiko fa tsy hahatsapa fandriampahalemana mihitsy ry zareo raha tsy mifarana ny fifehezana lavareny ataon'ny tafika any amin'ny faritra misy azy ka afaka hody am-pilaminana, amim-pahamendrehana ary amim-pahatoniana ry zareo.
Lumad nafindra tany Haran, Davao City. Sary avy amin'i Inday Espina-Varona.
Naverin'ny  haino aman-jery mifandray amin'i Beyani fa ny fanambaràny teo am-piaingana dia ” maneho ny fehinteny ôfisialy sy ny fomba fijerin'ilay Mpitondra teny manokana, ao anatin'izany ny momba ireo vahoaka indizena any Davao.”
Ankoatry ny fanizingizinana fa olona iharan'ny fanondranana ireo mpialokaloka ireo dia notanisain'ny tafika fa notenenin'i Beyani hoe ” nolalaovin” ireo vondrona mafana fo mba “haondrana” sy “ho gadraina” ao anatin'ny UCCP ireo mpialokaloka ireo. Raha ny marina dia ambaran'ilay rakipeo fa ireo mpitandro filaminana izay nanao bemidina tao anatin'ny fiangonana, ireo no tondroina ho “nolalaovina”.
Nolazain'i  Carlos Isagani Zarate solontena (Voalohan'ny Firenena) Bayan Muna fa nidika ” ho fanalàna baràka azy, fanamaivanana ny asany ôfisialy sy ny fampandehanan-draharaha ao amin'ny Firenena Mikambana ” ny fandikàna vilana ny fanambarana ôfisialin'ny Firenena Mikambana. Mandritra izany fotoana izany dia nolazain'i Gabriela, Solontenan'ny Vehivavy Luzviminda Ilagan fa ” fahadisoam-pamindra politika izay mametraka ny governemanta Filipiana izay nanasa an'i Dr Beyani ho amin'ny toe-draharaha mahamenatra sy manahirana ” iny trangan-javatra iny.
Nasongadin'ilay mpanao gazety, Inday Varona, tao amin'ny bilaoginy fa ilay lahatsary navoakan'ny tafika, mirakitra ny teny fohy nataon'i Beyani teo am-pivoahana ny toby Aguindaldo niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra miaramila, dia manaporofo fa nisy andalan-teny manan-danja nahilik'izy ireo tao amin'ny dikateny nataon'izy ireo avy amin'ilay fanambaràn'i Beyani :
Moa ve nodikain'ny AFP ny fenitra tamin'ny nanaporitsahana ny resadresaka tamin'i Beyani ? Ny biraon'ny Firenena Mikambana irery ihany no afaka mamaly izany. Mampiseho ny marina ilay fiparitahana. Aharihariny amin'ny vahoaka fa novonoin'ny AFP ilay ampahany mavesa-danja sy tena ilaina tamin'ny fanambaran'i Beyani.
Miala tsiny ny tafika, mametra-pialàna ny mpitondra teny
Navoakan’ ny AFP ny fanambarana ôfisialy iray nilazàny fa io no fandikàny manokana ny fanamarihan'i Beyani. Nefa amin'izao fotoana izao ry zareo niala tsiny tamin'ny Mpiasan'ny Firenena Mikambana. Ankoatr'izay, efa nametra-pialàna tsy ho amin'ny toerany ny mpitondra tenin'ny vondrom-paritry ny tafika.
Tandindonin'ny asa fitrandrahana harena ambanin'ny tany midadasika be ny tanindrazan'ireo lumad Mindao. Nahakasika ny famindràn-toerana ireo foko tao an-tànanan'i Cotabato atsimo izay nandrosoana hevitra ho fitrandrahana harena ankibon'ny tany manao tafo lanitra ny tatitry ny Firenena Mikambana. Sariitatra avy amin'ireo vondron'ny haino aman-jery samihafan'i Davao Today.
Nihaona tamin'ireo olona avotra tamin'ilay tafiotra Haiyan (” Yolanda” no anarany any an-toerana ) sy ireo nafindra toerana noho ny ady tany Zamboanga ihany koa i Beyani nandritra ny fitsidihany tany Filipina. Naneho ny ahiahiny momba ny haratsin'ny fepetra iainan'ireo olona avotra tamin'i Haiyan  izy, ary niteny fa maro amin'izy ireo no mbola mitohy miaina amin'ny fialofana vonjimaika tena voretra, na dia efa ho taona roa aty aorian'ilay tafiotra mahery indrindra teto an-tany namely an'i Filipina tamin'ny Novambra 2013 aza.
Araka ny filazan'ireo vondrona iraisam-pirenena mikarakara ny maha-olona dia 260.000 IDPs, na ireo olona nafindra toerana ao anatiny ihany ao Filipina,  izay ianjadian'ny loza voajanahary tafahoatra sy niharan'ireo fifanolanana mitàm-piadiana any amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena.
Ho fiarovana ny zon'ny IDPs, dia mitaky  ny fankatoavana ilay volavolan-dalàna izay notsipahan'ny Filoham-pirenena an-kitsirano tamin'ny 2013 ilay mpiasan'ny Firenena Mikambana. Mety hanamafy orina ny andraikitr'ireo sampana ao amin'ny governemanta hanaiky sy hampiroborobo ny fanampiana ny IDPs ilay lalàna.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/08/14/73011/
 Fanambaràna iray an-gazety: http://dwdd.com.ph/2015/lumads-in-haran-are-manipulated-not-evacuees-but-victims-of-trafficking/
 ny raharaha fanondranana olona : https://karapatansmr.wordpress.com/2015/07/31/hr-group-catamco-and-dcpo-are-the-real-human-traffickers/
 tatitra ôfisialy: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16280&LangID=E
 Naverin'ny : http://www.interaksyon.com/article/115816/gross-misrepresentation--beyani-never-said-davao-lumad-trafficked---un-experts-aide
 ambaran'ilay rakipeo : http://www.rappler.com/move-ph/102460-military-grossly-distorted-un-rapporteur-views-lumad-evacuees?utm_source=facebook&utm_medium=referral
 bilaoginy : http://indayvarona.com/2015/08/11/special-mission-harold-cabunocs-truth/
 260.000 IDPs, na ireo olona nafindra toerana ao anatiny ihany ao Filipina,: http://www.internal-displacement.org/south-and-south-east-asia/philippines/figures-analysis